Vagadziri ikozvino vane beta 5 ye macOS High Sierra 10.13.3 inowanikwa | Ndinobva mac
MacOS Yakakwira Sierra 5 beta 10.13.3 yave kuwanikwa kune vanogadzira
Uye ndezvekuti mazuva manomwe apfuura kubva kuvhurwa kweiyo yapfuura beta vhezheni yevagadziri ve macOS Yakakwira Sierra 10.13.3 uye Apple haisunungure. Shanduro dze beta dzinosvika nenguva yekugadzwa kwavo uye mune iyi zuva rakasarudzwa neChipiri, senge svondo rapfuura.
Pane iyo vhezheni yacho, hapana zvakawanda zvakadzama patafura asi hazvitarisirwe kuwedzera shanduko huru kana ichienzaniswa neshanduro yapfuura Chii chiri chokwadi ndechekuti iyi nyowani macOS beta 5 inowedzera zvakajairika Kugadziriswa kwezvipenga uye kugadzirisa kugadzikana kwesisitimu.
Apple haina kuomeswa uye inoda kuita iyo inotevera vhezheni ye macOS igadzikane sezvinobvira kusvika kumwedzi waChikumi uye kukwanisa kuburitsa dzimwe nhau yeiyo OS yeMac.Tinofanira kutaura kuti nguva pfupi yadarika havana kunyatsonaka kubva Cupertino neshanduro dzepamutemo uye izvi zvinouya nezvimwe zvikanganiso zvisingatenderwe, ndosaka kururamisa mushanduro dzevagadziri kuchikosha.
Pakupedzisira isu tinotarisira kuti iwo matsva emhando dzeshanduro haauye nemabhugi makuru uye inogadziridza yakanyarara munzira dzese. Rangarira kuti iyo nyowani vhezheni yevagadziri yatove kuwanikwa paApple webhusaiti kune avo vane account yepamutemo, parizvino iyo beta vhezheni haiwanikwe kune vashandisi vari mune yeruzhinji vhezheni chirongwa, asi zvinokwanisika kuti mune anotevera mashoma maawa achaburitswa. Apple inoramba ichiita zvirinani munzira dzakawanda uye ichitowedzera kuwedzera mune vamwe, asi usarasikirwa nemukana wekuburitsa mabetas matsva evagadziri ekushandira uye vabatsire kunatsiridza hurongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » MacOS Yakakwira Sierra 5 beta 10.13.3 yave kuwanikwa kune vanogadzira
Yekutanga Apple Store muSouth Korea ichavhurwa muna Ndira 27
Zvigadziriso zvemberi zve trackpad mashandiro mu macOS